Koperativa MADAOMBY 9.000 Ar no hamoahany ny kilaon’ny henan’omby eny amin’ny abatoara
Mbola mijanona eo amin’ny 12.000 Ar ihany hatramin’izao ny iray kilao amin’ny henan’omby eny an-tsena. Misy mihitsy aza no 13.000 Ar ho an’ireo karazany tsy mifangaro sady matavy tsara. Raha araka ny fanazavan’Atoa Tahiry Sambehafa, lehiben’ny koperativa Madaomby anefa dia efa tsy tokony ho izany intsony ny vidiny eny an-tsena amin’izao.
Efa nofehezin’izy ireo ny eny anivon’ny abatora. 9.000 Ar no hamarotany ny iray kilao ho an’ireo karazany mahia raha 10.000 Ar ireo karazany matavy. Ho an’itsy voalohany aza dia efa nidina hatrany amin’ny 7.000 Ar. Nomarihiny manokana fa ireo eny amin’ny mpaninjara no tena maka tombony betsaka amin’ny mpanjifa. Mikasika ny omby eto Madagasikara manokana dia notsindriany fa ahiana ihany ny hahalany ringana azy ireny raha tsy misy fepetra raisin’ny fitondram-panjakana mikasika ny firongatry ny asan-dahalo. Mihakivy mantsy ireo tantsaha mpiompy, hoy izy, hany ka betsaka ireo lasa mirona amin-java-kafa.